Juqraafi: Ku rakib mashruuc maxalli ah - Geofumadas
Kiisku wuxuu ka dhacay mashruuc ay saldhigga dhexe ku lahayd Oracle, laakiin in lagu sameeyo dayactirka cadawga ee heerarka degmooyinka ama bandhigyada caamka ah, saldhiga sifooyinka ayaa loo baahan yahay si loo saxo khariidado aan xiriir la lahayn.
Sida loo qabtay
Kaliya kuwa jecel in ay ogaadaan sida waxaa sigaar cabbin, halkan baan ku sharixi, sababtoo ah laba sano gudahood, waxaana suurto gal mashruucan waxaa u guureen Bentley Map iyo waxba ka waxtar leh u noqon doonaa, marka laga reebo a guys 8 og sida ay u iguanear xawaaraha of u baahan tahay xariif dadweynaha iyo kuwa gaarka.
Faylka Isticmaalka waxaa loo sameeyay, laga bilaabo mashruuca Oracle, oo lahaa jadwalka aasaasiga ah ee 10 a Mashruuca Juquraafi, oo ay ku jirto nuxurkiisa iyo ku haynta magaca Generica.mdb. Shaxan waa sida soo socota:
Kadibna faylka qaabka qaabeynta qaabka loo yaqaan Geographics msgeo.ucf taasi waxay lahayd dhinacyo aasaasi ah oo ku xirnaanta saldhiggaas. Tani waxay muujineysaa ku darista khadadka soo socda ee u dhexeeya xuduudaha isku xirka:
MS_GEOPROJNAME = mashruuc_ maxalli ah
MS_GEOINITCMD = MASHRUUCA FURmay
MS_GEODBLOGIN = mashruuc_ maxalli ah
Mabda 'ahaan, waxa laga filaayay waxay ahayd in dadka isticmaala ee aan si fiican u hanqal taagin caloosha mashruucu ay ka fogaan doonaan madax xanuun inay isku xirmaan. Ka dib markii aan dhowr jeer ku sharraxay sabuuradda, telefoonka, boostada, farriinta, ma lihi xulasho aan ka ahayn inaan halkaan ku qoro maxaa yeelay waxaan arkay inay tahay meeshii ugu dambeysay halkaas oo ay weydiinayaan.
Haddii aad rabto tallaabo tallaabo ah, adigoon raacin erayada 850, ha ka tagin wax ka yar tallaabooyinka 15 ... iyo sida ay sheegaan marka ay soo diraan warbixinta ... oh sidaas!
Heerka 1: Shuruudaha
Waxaa lagama maarmaan ah in isticmaalaha uu leeyahay ugu yaraan qalabkan 5 si uu ugu sii socdo rakibaadda tallaabooyinka 15:
Rakibay Microstation V8.5
Qalabka Microstation Juquraafiyada V8.5
Foomka abuurka leh qaabka gaarka ah ee mashruuca loo yaqaan seed2d.dgn
Faylka qaabeynta qaabka loo yaqaan msgeo.ucf
Xogta loo yaqaan " Generica.mdb
Heerka 2: Ku rakib barnaamijyada
1 Ku rakib Microstation
2 Ku rakib Juquraafi (Waa inuu ahaadaa sidan oo kale)
3 Nuqul oo bedel feylka ciwaanka cinwaanka:
4 Ku duub feylka userka cinwaankan:
5. Ku nuqul saldhigga guud cinwaankan:
Waa inaad ka taxaddartaa, in haddii Windows-ku ku qoran yahay Ingiriis, ay noqonayso C: Program FilesBentley ... Waxaana la doorbidayaa inaad ku rakibto barnaamijka disk C, xitaa haddii aad leedahay wax ka badan hal disk adag.
Xajka 3: Abuuri xiriirka ODBC
6 Sida aan u xaqiijinnay in xiriirku uu noqon doono ODBC, waxaan ku xallin doonaa tallaabada dheer ee 6 (Waxaan isticmaalayaa Windows XP)
-Start> guddiga xakamaynta> qalabka maamulka> ilaha xogta (ODBC)
-Guddiga u muuqda, xulo tabta "Isticmaalaha DSN" oo dooro "ku dar"> microsoft Driver mdb> dhamee
-Ka xus magaca magaca isha xogta, local_project oo dooro badhanka "abuur"
- Ka dib markaad tilmaanso meesha aad ka abuuri karto xogta, si toos ah oo C ah una wac local_project.mdb, ka soo bax guddiga, adigoo sheega laba jeer.
Si aad u hubiso in ay tahay sida aan codsanay, marka la dooranayo asalka asalka iyo badhanka "configure" waa in uu sidan oo kale u egyahay:
Xajka 4: Abuuri mashruuca Juquraafi
7 Geli Juquraafi
8 Ka soco kan ugu sareeya dooro
Mashruuc> saaxir> xiga> abuur mashruuc
9. U qaabee astaamaha sida garaafku u muuqdo. Muhiim ma aha in la beddelo dariiqa faylka abuurka.
Abuur> xiga> xaqiiji, diiwaangeli mapid> baajiso
Iyada oo tan la adeegsanayo, buug ayaa la abuuray halka ay ku yaalliin dhammaan fayllada uu adeegsado mashruuca Juquraafiga, iyo miisaska lagama maarmaanka u ah saldhigga ee loo yaqaan 'local_project.mdb'. Sida iska cad iyada oo aan lahayn muuqaalo ama qaybo. Si aad u hubiso:
10 Xiritaan Juquraafi
11. Open Juquraafi, waa inay si toos ah u furtaa mashruuca. (Haddii kale, waxbaa ka qaldan tallaabada 9aad ama kamaannaan nuqulan faylka ucf sida tallaabada 4aad u leedahay)
12 Haddii wax walba ay u socdaan
Adeegyada> Maamulaha muuqaalka
Mashruucu waa inuu kor u qaadaa, laakiin aan lahayn sifooyin ama kooxo kale oo aan aheyn dumyada oo ku imanaysa mid aan caadi ahayn.
11 Xiritaan Juquraafi
Xajka 5: Dib u habee database-ka
Hadda waxa aan ku mashquulsanahay waa inaan khiyaanayno Microstation, ka saarista macluumaadka bilaashka ah, tan:
12 Tirtir xogta C: proyecto_local.mdb
13 Diiwaanka xogta C: Generica.mdb bedel magaca si ay u noqoto foomka C: proyecto_local.mdb
14 Geli Juquraafi
Diiwaanka waa inuu si toos ah u shaqeynayaa, haddii kale, magaca faylka ee 13 ayaa la tuuray
15. Haddii wax waliba si fiican u shaqeeyaan, marka la tegayo Adeegyada> Maareeyaha muuqaalka, qaybaha iyo astaamaha keydka macluumaadka waa in kor loo qaadaa.
Mid ka mid ah chascada
Ninyahow, marka xigta waa inay i yeeshaan xitaa haddii aan ka imaado taangiyada xadka. Oo sidaasaad u arki kartaa iimaankayga iyo mania jajabka tortilla, halkan waxaad kala soo bixi kartaa:
Faylka abuurka seed2d.dgn
Post Previous" Hore Isbarbardhiga barnaamijka GIS si loogu sahlo
Post Next Socdaalka, diyaarinta fiidiyowNext »
5 Jawaab ah "Juqraafi: Ku rakib mashruuc maxalli ah"
Wuxuu caan ku noqday saaxiibka La Paz, sababtoo ah inuu ogaado in uu yahay seed2d sax ah, waxay siiyaan boodhka saxda ah ee muraayada guryaha waa inay sheegaan in qoraagu yahay jnunez.
Waa inaad u dirtaa xiriirkaan emailka kuwa fuliyay kuwaas oo had iyo jeer diidaya sababtoo ah ma dhisi karaan barnaamijka gebi ahaanba.
Way fiicantahay ……
mitazaki isagu wuxuu leeyahay:
xiiso leh waxa aan raadinayay waan samayn doonaa, natiijooyinkana wax ok!
Waad ku mahadsan tahay haa, marwalba waa la igu dhiirrigeliyay, waan kufsaday, waxaan soo marey dooxada comayagua si aan u soo qaato gawaarida